Hadaba Maxaa u Qabsoomey Wasiiradii Cusbaa Ee loo Magaabey K/Galbeed:-(Akhriso) – hareerley
Hadaba Maxaa u Qabsoomey Wasiiradii Cusbaa Ee loo Magaabey K/Galbeed:-(Akhriso)
June 22, 2019 June 22, 2019 Daadir	0 Comments
Hadaba kolkii isbedel ku yimid Maamulka K/Galbeed ayaa waxaa la Magacaabey Gole Wasiiro Cusub Oo ay shacabka ka sugayeen in ay ku soo kordhiyaan waxyaabo isbadal muuqda Oo shacabku Taaban karaan .
Haddii aanu soo Qaadno Gobolka Shabeelaha hoose ayaa waxaan ku aragney hal wasiir iyo wasiir ku xigeen Oo booqdey.
Hadaba Wasiirada Cusub ee K/Galbeed maxay ku soo kordhiyeen Shacabka ayaa u baahan horumar la taaban karo wasiirada qaar ayaa uun barahooda bulshada kula wadaaga shacabka waxyaabo kale Oo aanan micna ku jirin.
Wasiiradaan markii lagu dhawaaqey ayaa dhaiinyaradu K/Galbeed u riyaaqdey iyagoo markaasi u Arkaayey in ay isbadal muuqda ka sameeyaan Cariga K/Galbeed hadii ay noqoto warfaafin,shaqo,dhanka beeraha,biyaha iwm.
Hadaba shacabka ayaa idiin xisaabinaya in waxqadku muuqdo iyagoon dowlada dhexe Cambaarey ileyn Dowlada dhexe waxaa shacabka uga mas’uul ah waa Maamulka K/Galbeed Maamulkana idinka ayuu idiin igmadey Soomaliduna waxay ku maahmaahdaa” hadalyar iyo howl badan” waa taasi tan lagu najaxi karo.
Baarlamaankana Qormo ayaan ka soo qori doonaa siduu u shaqeeyaa Barlamaankani K/Galbeed ma yahay mid ka duwan kii hore.
W/Q :-Xuseen Sadiiq Cali
Xuseen Sadiik home facebook
← (Daawo):- Sidee looga Dabaaldegey Magaalada Marka iyo Shiribyada ka dhacay..
Golaha Baarlamaanka Soomaliya Oo kulmaya hadaba maxaa looga hadleyaa? →
R/W Kheyre oo xalay ku hoyday Dhuusamareeb & kulamo ka socda0 45
Hogaamiyaha Koonfur Galbeed oo Magacaabis Sameeyay0 45
G0laha shacabka oo meel mariyey sharci muhiim ah0 45
Hogaamiye Laftagareen oo kulan la qaatay wafdi ka socda DFS & QM:-(Sawiro)0 45
War Saxaafadeed ka soo Baxay Gudigii Xaqiiqo Raadinta Ee BJFS:-(Akhriso)0 45
Hassan Rouhani says Iran is still keen to save nuclear deal0 45
Turkish sailors detained in Libya arrive in Istanbul0 45
UN Human Rights Chief Urges Swift Transition in Sudan0 45
DEG DEG: Ciidamada Amaanka Iyo Al Shabaab oo ku dagaalamay Muqdisho Iyo Toogasho ka dhacday magaalada….0 45
(Daawo):- R/W Xasan Cali Kheyre Oo Dhalinyarada Galkacyo Kula Hadley Garoonka Cawaale0 45
Magaalada Marka Oo si weyn looga Dabaal degey Munaasabada Xoriyada Soomaliya Ee 1da luulyo:-(Sawiro)0 45
Dowladda Soomaaliya oo xiriirka u jartay dalka Guinea0 45